သင်၏ TikTok အကောင့်ကို မှန်ကန်စွာ ဖျက်နည်း
သို့သော်၊ သင်သည် Tik Tok ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်များမရှိတော့သည့်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်လက်မှတ်ထိုးခြင်းထက်သင်၏ Tik Tok အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်လိုပေမည်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာ Tik Tok အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖျက်ရမလဲဆိုတာပြပေးပါမယ်။
1 အဆင့်။ Tik Tok ကိုသင်၏စက်ကိရိယာဖြင့်ဖွင့်ပါ (iOS နှင့် Android)
2 အဆင့်။ ယခု 'ကိုနှိပ်ပါ။Meသင့်ရဲ့ feed ကို၏အောက်ခြေတွင် '' tab ကို။
ဘတ် Windows 11 မှာ taskbar ကိုအလိုအလျောက်ဘယ်လိုဖုံးကွယ်မလဲ
3 အဆင့်။ သင်၏ dashboard မှ၊ ကိုနှိပ်ပါ သုံးအစက် ထိပ်ညာဘက်ခြမ်းရှိခလုတ်ကို။
အဆင့် 4. ဝင်းဒိုးအသစ်တွင် 'ကိုနှိပ်ပါ၊ကျွန်ုပ်အကောင့်ကိုစီမံပါ'' option ကို။
အဆင့် 5. ယခု ဝင်းဒိုးအသစ်၏အောက်ခြေတွင် 'ကိုနှိပ်ပါ၊အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်'' ။
အဆင့် 6. ယခု သင်သည် သင်၏ စာရင်းသွင်းထားသော မိုဘိုင်းနံပါတ်တွင် အတည်ပြုကုဒ်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အတူတူရိုက်ထည့်ပြီး 'အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ၊ဆက္သြား'' ။
အဆင့် 7. နောက်စခရင်ပေါ်ရှိ အမှတ်များကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် 'ကိုနှိပ်ပါ၊အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်'' ။
သင့်အကောင့်ကို Tik Tok မှ ဖျက်လိုက်ပါမည်။ သင်၏ TikTok အကောင့်ကို သင်ဖျက်လိုက်သည့်အခါတွင်၊ သင့်အကောင့်တွင်ရှိသည့် ဒေတာအားလုံးလည်း ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖျက်ခြင်းမပြုမီ ၎င်းကို ပိုကောင်းအောင် စဉ်းစားသင့်သည်။
လွန်ခဲ့သော သင့်ပို့စ်များကို Facebook တွင် မျှဝေနိုင်စေရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်း
နောက်တစ်ခု Google Earth ကို အသုံးပြု၍ အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ သွားလာနည်း